Torohevitra hampihenana melanin ny hoditra | Nutri Diet
La melanina azo ahena izany noho ny vitamina samihafa. Ny menaka dia misy vitamina A, antsoina koa hoe retinol, izay manentana ny fitomboan'ny sela vaovao. Na dia tsy manala melanin aza ny retinol dia afaka manolo ny hyperpigmentation ny hoditra noho ny fitomboan'ny sela vaovao. Ny sakafo manankarena vitamina toy ny karaoty, legioma maitso, ovy, na aty dia tokony hampidirina ao anaty sakafo. Vokatra manan-karena amin'ny retinol daholo.
Ankoatra izany, ny asidra ascorbic, fantatra ihany koa amin'ny hoe vitamina C, dia manana toetra antioksida izay miditra ao anaty hoditra ary manampy amin'ny fifehezana ny fanakanana sy ny famokarana melanin. Noho izany, raha miseho masoandro ianao ary mampihatra menaka manankarena vitaminina C, ireo antioksidanany dia hanafoana ny sela mamokatra melanin, ary noho izany hihena ny isany. Toy izany koa, ny vitamina C dia azo ampidirina ao anaty sakafo, satria hita ao anaty voankazo, voaloboka, poivra, legioma maintso izy io.
La vitamina K, ny vitamina avy amin'ny masoandro, no hany vokarin'ny vatana samirery. Rehefa mampiharihary tena taratra UV, manomboka ny famokarana. Ankehitriny, vitamina K dia ampiasaina amin'ny vokatra kosmetika maro hanampiana amin'ny fandokoana ny hoditra. Ny famokarana voajanahary dia azo ampiroboroboana amin'ny alàlan'ny fihinanana suplementa vitamine D, na ny vitamina K dia azo jerena amin'ny sakafo manan-karena vitamina D, toy ny serealy, vokatra vita amin'ny ronono, trondro ary soja.
Hiadiana amin'ny olan'ny hoditra, ny vitamin E mpiara-dia tsara. Na dia tsy mihetsika mivantana amin'ny famokarana melanin'ilay hoditra aza izy io, dia manaparitaka pigment miady amin'ny melanin izy ary mankasitraka ny famerenana haingana ny tonony. Raha atao teny hafa, dia manampy ny famelomana aina ary amin'ny fanoloana sela simba. Ny otrikaina E. dia azo alaina amin'ny kapsily na amin'ny fampidirana trondro matavy, epinara ary kennel amin'ny sakafo. Ankoatr'izay dia misy menaka misy aloe vera na ferment de trité izay mety amin'ny fahazoana an'io vitamina io.
Etsy ankilany, tsara ny mangataka torohevitra amin'ny mpivarotra fanafody momba ny crème adika amin'ny karazana hoditrao ary manampy anao hanafotsy sy hampihena ny kilema. Raha te hiasa tsara dia tsy maintsy misy akora toy ny retinoic acid ireto menaka ireto asidra azelaic, ankoatry ny singa hafa izay manampy amin'ny fihenan'ny melanin amin'ny hoditra.
Farany, tadidio fa raha mampiharihary ny masonao amin'ny masoandro ianao dia tsy maintsy manosotra takelaka amin'ny masoandro hisorohana ny Taratra UV fihetsika, izay mety hiteraka fahasimbana amin'ny hoditra. Rehefa mandeha ny fotoana, raha tsy mitandrina ny tena, dia simba ny hoditra ary mihosin-koditra vokatry ny famokarana be loatra melanina. Ny fampiasana tabilao masoandro dia ahafahanao mifehy an'io trangan-javatra io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Torohevitra hampihenana melanin ny hoditra
Mahaliana Sooo. Misaotra